Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 17/01/2020)
Unogona kusvika guta nechitima kubva zvapo Italy, kana zvimwe, se Siwizarendi uye France. Kune dzose, soro-nokukurumidza nezvitima kuti aende kakawanda zuva nezuva kubva Milan uye Roma, asiwo kubva Venice. Nzendo idzi kutora maawa asingasviki maviri, uye imi makakohwa mukana kuona zvikomo akanaka uye minda Italy.
Saka wagadzirira kuwana maguta waini Europe? SaveATrain.com zvichakubatsira kuwana guta ripi mu Europe, kutsanya, chipa uye achinyemwerera!